UKUFUDUMEZA ITHAWULA UKUFUDUMALA KUNYE NEERACK IDEAS - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Ukufudumeza ithawula ukufudumala kunye neeRack Ideas
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kwishushu ukufudumeza itawuli kunye nemibono yokubeka, kubandakanya iintlobo zoyilo ezithandwayo kunye neemodeli ezivavanywe ngcono kwigumbi lakho lokuhlambela.
Isifudumezi sokufudumeza itawuli kwaye ishushu itawuli yokubeka ityhefu yinkqubo yokuthuka eyenzelwe ukufudumeza iitawuli ngaphambi kokuba uzisebenzise. Banako ukomisa iitawuli kancinci ngelixa kushushubeza iitawuli. Oku kunokwenziwa ngeendlela ezimbalwa. Enye indlela kukuba nefowuni eshushu ingena ngombhobho osetyenziselwa ukwenza uloliwe. Enye indlela enokwenziwa ngayo kukuba ioyile eshushu okanye amanzi aqukuqelayo kuloliwe.
Olu longezo olukhulu kuyo nayiphi na indawo apho unokuxhoma iitawuli phezulu, kodwa kuyenzeka kakhulu kwiindawo ezinjengegumbi lokuhlambela apho unakho ukufikelela kumbhobho wamanzi okanye iintambo zombane kwaye unqwenela itawuli efudumeleyo neyomileyo ebhafini okanye eshaweni.
Sebenzisa ukufudumala kwetawuli eshushu
Ngaba ukufudumeza ithawula kuya kushushubeza igumbi lokuhlambela?
Uyifaka njani iRack Towel Rack
Ukukhetha iRack yeTawuli eshushu yokuhlambela
Yintoni ekufuneka ujonge kuyo ngokuFudumeza ithawula
Ubushushu ithawula leposi
Ileli shushu ithawula leposi
Indawo ezimeleyo ezifudumeleyo zivutha iRack Towel Rack
IKhabhinethi yeThawula eshushu
Eyona ndawo ilungileyo yokufudumeza ithawula kunye neeWarmer
Uhlobo lweHomeleader Ladder Isitayile eshushu shushu
I-Spa Luxe eshushu iThawula yeKhabhinethi
I-Homeleader ezimeleyo ezimeleyo ezishushu ngetawuli ephezulu
I-Amba egudileyo yeNtaba yeTawuli yokuFudumala
I-Innoka 2-in-1 Ukuzifudumeza ngethawula
Zadro itawuli Ubushushu iBhakethi
Xa usebenzisa itawuli evuthayo kukho iziphumo ezimbini ezinqwenelekayo. Kuqala kuyathenjwa ukuba iyayitshisa itawuli ebekwe kwindawo yokubeka. Okwesibini, ikwafuna ukomisa itawuli ukuba kwenzeka ukuba kumanzi. Eyona ndlela yokufezekisa le misebenzi ngeyona ndlela ifanelekileyo kukufumana ubuninzi bomphezulu wetawuli ukuze ubambe okanye usondele kwindawo yokubeka. Oku kwenziwa ngcono ngokusonga itawuli kwisiqingatha, isithathu okanye isine kwaye uyijube ngaphezulu komqolo. Nje ukuba utshintshe irowuli yokufudumeza kuyo iya kusebenza ngomlingo wayo kwindawo yetawuli kuyo.
Into ekufuneka uyiqaphele xa unezi zinto kukuba i-rack iya kushushu xa isetyenziswa. Oku kuthetha ukuba kufuneka icinywe xa ingasetyenziswa kwaye kunokuba yingozi xa uyibamba xa isasebenza. Oku kunokwenzeka ukuba ayilulo ukhetho olufanelekileyo kusapho okanye kwigumbi lokuhlambela labantwana, okanye kwindawo kawonkewonke enje ngekhitshi.
Iprojekti enkulu eza nokuba nepilisi yokufudumeza itawuli kukuba ubushushu bushushu kwitawuli yokufudumeza itawuli kunokunceda ukufudumeza igumbi lokuhlambela elibekwe kulo. Le nto ithethwayo, akufuneki ibe kuphela komthombo wobushushu kwigumbi lokuhlambela, ngakumbi kwigumbi lokuhlambela elikhulu kuba itawuli yokurhawula ayinakubanakho ukuhlangabezana neemfuno zenkqubo yokufudumeza epheleleyo. Iitawuli kufuneka ukuba zisetyenziselwe ukufudumeza iitawuli.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili zimbini iindlela ezinokuthi zisebenze ngayo iarley yethayile eshushu: ngeengcingo zokufudumeza (zombane), okanye imibhobho eshushu (hyrdronic). Ngokusekwe kuhlobo luni lwethayile yokufudumeza ocinga ngayo ekufakweni kakhulu kweendlela zokufakwa.
Kwitawuli eqinileyo enesifudumezi eshushu kufuneka uqiniseke ukuba kukho umbane ofanelekileyo kwindawo onqwenela ukuyibeka kuyo. Le yiprojekthi elungileyo yokuqesha umbane ukuba awunamava emsebenzini wombane. Ukuba unobuchule kwezombane kungcono ukuqhuba intambo eludongeni apho unqwenela ukubeka i-rack kwisekethe ekhuselweyo ye-GFCI, ukuba oku kunokwenziwa kanye emva komqolo ukuze ibotshelelwe kwirack, inika inkangeleko ecocekileyo. Emva kokufaka i-rack ngaphezulu kweentambo kufuneka kube lula njengokucima nokucima apho. Ukuba kukho imiyalelo kwinto oyithengileyo qiniseka ukuba uyayilandela.
Ukwenza umbhobho oshushu ngetawuli eshushu ukufudumala kukho umsebenzi omninzi. Kufuneka kubekho imibhobho ehamba ngapha nangapha, kwaye imibhobho kufuneka idibane naleyo ikhoyo ukuze amanzi ashushu akwazi ukuhamba ngayo. Oku kunokufuna isidingo sokunxibelelana noplamba ukuba awungomntu onamava ngemibhobho ngemipu. Ngamagama alula ukufakela i-rack kufuneka uhambise ngokutsha umbhobho wamanzi ashushu ngerack, kwaye njengoko uvula okanye ucima imibhobho ushushu ngamanzi ahambayo.
Uyilo lwale mihla lokuhlambela lubonisa itawuli eshushu yokufikeleleka kwindawo yokuhlambela. Ukongeza enye yezi zinto zinokuba zi-DIY enkulu remodel yokuhlambela Iprojekthi enokongeza into eyongezelelweyo kunye nexabiso ekhayeni lakho.
Ngelixa iarley eshushu evuthayo iyinto eyahlukileyo, kusekho ukhetho oluninzi olwahlukileyo ekufuneka luthathelwe ingqalelo ukufumana itawuli efanelekileyo yokufumana isitayile kunye neemfuno zakho.
Kukho itoni yezinto ekufuneka ujonge kuzo xa uthenga itawuli eshushu, kodwa izinto ezintathu ezibalulekileyo ekufuneka uzigcine engqondweni zezi zilandelayo:
Uhlobo : Ngokukhethwa kwesitayile kuza ukhetho lombala olusekwe kumxholo kunye nenkuthazo yekhaya. Ubuninzi beetawuli ezifudumeleyo ziza ngentsimbi esemgangathweni okanye umbala we-chrome, kodwa kwiiprojekthi ezinobunewunewu kukho ezinye iindlela zokhetho ezinokukhethwa kuzo. Nokuba iimilo zemivalo zinokutshintsha ukuze zilungele umxholo okanye isitayile ozama ukusilinganisa, zive ukhululekile ukuba uyile ngayo kwaye ufumane okukufaneleyo.
Ukhuseleko: Indawo ebekwe kwindawo yokufudumeza itawuli kunye nokuba ishushu kangakanani kufuneka ibeyindlela yokulumka. Kuba ezi kufuneka zibe zizifudumezi zetawuli ukuba isinyithi kwiintonga zeeracks kufuneka zifudumale ukuze zome kakuhle kwaye zifudumeze iitawuli, oku kungadala ingozi ukuba ngempazamo ubambe irack. Ezinye iindlela zinokuchongwa ukunqanda oku kwiindawo ocinga ukuba zinokuba yingxaki kumsebenzisi. Ukongeza, kuba ezi yunithi zihamba ngombane kubalulekile ukuba zibotshelelwe ngokufanelekileyo eludongeni ukuze zingabangeli ingozi yombane.
Umthamo wokugcina : Umthamo wokugcina yenye into enkulu ekufuneka uyiqwalasele xa ukhetha uhlobo lwetawuli eshushu olufunayo, usazi ubungakanani bezinto ofuna ukuzifudumeza kwaye zome. Ukufumana itawuli yetawuli kunokuba kuhle kwizithuba ezincinci kunye nobungakanani bezinto. Kukho ii-racks ezinkulu ngakumbi onokuzifumana ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho ezithile. Ukuba ezo azikabi nkulu ngokwaneleyo kukho iikhabhathi ezifudumeleyo kunye neebhakethi ezifudumeleyo ezinokunceda ngezixa ezikhulu okanye izinto ezinkulu ezifuna ukomiswa okanye ukufudunyezwa.
UV inzalo : Ukucoca inzalo kwe-UV yindlela yokubulala iintsholongwane esebenzisa ukukhanya kwe-UV (ubude obufutshane be-ultraviolet ray) ukutshabalalisa ii-microoganisms kuyo nayiphi na into oyibulala iintsholongwane. Le ndlela isetyenziswa kwizixhobo ezininzi zokufudumeza itawuli ukongeza inqanaba lokucoceka kwitawuli. Le yinto ekufuneka uyijongile kwitawuli yokufudumeza isixhobo ngaphambi kokuba uyithenge, zixhaphakile ukufudumeza uhlobo lwentengiso, kodwa hayi njengesiqhelo kwiimveliso zekhaya eziqhelekileyo. Ukuba nendawo evaliweyo kubalulekile kule nkqubo.
Iindidi ezahlukeneyo zezixhobo zokufudumeza itawuli zichazwe apha ngezantsi: (Ezinye zinokudityaniswa zize ezi ndidi zilandelayo)
Irowu yokufudumeza itawuli eludongeni enyusiweyo ilungile kwiindawo apho kukho indawo encinci, njengoko inika i-rack isithuba eludongeni nasendleleni. Ezi ntlobo zeetawuli zeetawuli zihlala zincinci kwaye zikhaphukhaphu kubunzima bokuhlala kakuhle eludongeni. Nantoni na enzima kakhulu inokufuna ukuxhaswa okukhulu okanye ingawa eludongeni ukuba ayifakwanga ngokuchanekileyo.
I-ladder ye-towel yokubeka itreyini inokuba yeyokuhamba ngokukhululekileyo okanye eludongeni. Umsebenzi weleli sisitayile, esifana neladi enezintlu ezingaphezulu kwenye ngokungathi ungakhwela kuyo. Olu lukhetho olufanelekileyo lokuxhoma iitawuli ezininzi okanye ukuluka itawuli ngaphakathi nangaphandle ukuze indawo ezingaphezulu zifudumale kwaye zomiswe.
Indawo ezimeleyo yokufudumeza itawuli yokubeka i-rack iphikisana ne-rack eshushu eshushu. Olu hlobo luhlala luneenyawo zokuma kwaye lubekwe phantsi ukuze luzimele ngaphandle kwenkxaso engaphezulu. Ezi zihlala zisetyenziswa kwiindawo okanye kumagumbi apho i-rack isetyenziswe khona ngokukuko ukuze isuswe xa ingasetyenziswa. Ezi zihlala zithatha indawo engaphezulu kunento edongwe ngodonga kwaye zifuna intambo ekufuneka ifakwe kwiplagi ukuze ikwazi ukusebenzisa loo nto.
Ikhabhathi eshushu yetawuli yinto oqhele ukuyibona kwii-spas okanye i-salon yesikhonkwane, uhlobo olukhangeleka ngathi yifriji encinci, ngaphandle kokuba kushushu xa kuthelekiswa nezinto ezipholileyo ngaphakathi (kule meko iitawuli). Ikhabhathi eshushu yetawuli inokubamba kwaye ifudumale iitawuli ezininzi ngexesha kunokuba i-rack ingathi isetyenziswe kancinci kwicala lezorhwebo.
Uyilo lwebhakethi olushushu lokufudumeza itawuli yenye into enamashishini kunye nenketho yorhwebo, izisa ubushushu obungaphezulu kwitawuli yonke kunye nokukwazi ukufudumeza izinto ezininzi ngexesha elinye.
Apha sinciphise ezona zixhobo zifudumeleyo zishushu ngokufudumeleyo kunye nemibono yokubeka ukukunceda ukhethe eyona ikulungeleyo. Kolu luhlu sibandakanye ezona ndawo zilungileyo zihlaziyiweyo, kunye neekhabhathi.
I-Homeleader L34-002 I-Towel Warmer kunye ne-Racking Rack ine-9 yeentsimbi ezingenasici ezingenanto kwaye zifakwe kwi-thermostat. Le modeli ifikelele kwi-122 degrees Fahrenheit ukuya kwi-131 degrees Fahrenheit ngaphakathi kwemizuzu eli-15 ebekwe esweni yi-thermostat yangaphakathi. Olu luyilo lugcina indawo njengoko lwakhiwe eludongeni kwaye luyilo oluhambelana nokuvumela ukuba lusetyenziswe kwiindawo ezincinci.
Itafile yeHomeleader eshushu kunye neyomileyo inokufunyanwa ngokulandela eli khonkco: https://amzn.to/2LjdoOq
I-Spa Luxe eshushu iThawula IKhabhinethi ithawula CABI uyilo olutsha olusetyenziselwa ukugcina iitawuli zishushu kwaye zifumile. Ezi zihlala zisetyenziswa kwii-spas kunye nee-salon, kodwa zinokwenza udibaniso olukhulu kwigumbi lokuhlambela. Le modeli ingabamba malunga neetawuli ezingama-24. Ikhabhinethi yayinomnyango wokuvala ukunika ukucoceka okucocekileyo. Ngaphakathi ineeshelufu ezimbini zokubeka iitawuli kwaye ihlala ihambelana ne-160 degrees Fahrenheit.
IKhabinethi yeeTawuli eziTshisayo eziTshisayo inokufunyanwa ngokulandela eli khonkco: https://amzn.to/2Rhwgko
I-Homeleader TW-05S yokufudumeza ithawula kunye neRacking Rack inokuba yindawo ezimeleyo okanye eludongeni. Le rack ibeka ubushushu obumalunga ne-131 degrees Fahrenheit ukuya kwi-141 degrees Fahrenheit malunga nemizuzu engama-30 ukufudumeza iitawuli kwaye yakhelwe kwi-thermostat ukugcina amaqondo obushushu ekhuselekile kwaye ezinzile. Le modeli yenziwe ngentsimbi emhlophe ukunika uyilo lwangoku kunye nombala.
IHomeleader TW-05S itawuli eshushu kunye neyomileyo inokufunyanwa ngokulandela eli khonkco: https://amzn.to/2qlQvCE
I-Amba RWH-CP Radiant Hardwired Curved Towel Warmer ineebhari ezili-10 zokufudumeza nezomileyo iitawuli. Le modeli yenziwe ngentsimbi engenasici. I-Amba ubungakanani be-compact malunga nee-intshi ezingama-24 nge-32 intshi nge-intshi ezi-6, ukwenza kube lula ukuyibeka nakweyiphi na indawo yokuhlambela okanye kwenye indawo oyifunayo. Zombini imivalo ethe tye kunye ethe nkqo kwi-rack iyashushu.
I-Amba RWG-CP Radiant Towel Warmer inokufumaneka ngokulandela eli khonkco: https://amzn.to/37Vc2Ts
I-Innoka 2 kwi-1 itawuli eshushu ishushu yi-6-Bar aluminium rack enokubekwa eludongeni okanye ishiywe yodwa njengendawo yokuma ngokukhululekileyo. Isakhelo sealuminium sinesiphelo esigqityiweyo se-chrome. Le modeli inokuthi ibe yindawo yokuzimela, oko kuthetha ukuba ifuna okuncinci kakhulu kwinkqubo yokufaka, yongeza nje iinyawo kwaye kufanelekile ukuba ilungele ukuhamba. Le nto ifuna ukuba ifakwe ngaphakathi kwaye inokufikelela malunga ne-110 ukuya kwi-122 degrees Fahrenheit ngaphakathi komzuzu we-30 ukuya kwi-40.
I-Innoka 2 kwi-1 itawuli eshushu kunye neyomileyo inokufunyanwa ngokulandela eli khonkco: https://amzn.to/2FCRG4J
IBucket leZadro Ultra enkulu yokuFudumeza yahlukile kwezi ndawo zokufudumeza zikhankanywe apha ngasentla. Le modeli, njengoko igama lisitsho, imile njengebhakethi apho kukho indawo yeetawuli ezimbini zokuhlamba, iingubo, iingubo kunye neepijama. Le modeli ibandakanya isibali-xesha esinobude obuninzi ukufumana amanqanaba afanelekileyo obushushu bezinto ezinqwenelekayo. Ngayo yonke into ingaphakathi kwebhakethi, ifudunyezwa ngokulinganayo, ngokungafaniyo neeracks apho kuphela izinto ezichaphazela isinyithi zifudunyezwa yiyo. Le nto ifuna ukuyiplaga ukuze isetyenziswe, kodwa inendawo yokugcina ukuze igcinwe xa ingasetyenziswa.
Ibhakethi elifudumeleyo lethawula leZadro linokufunyanwa ngokulandela eli khonkco: https://amzn.to/34HCjme
Ukufumana ezinye izimvo ezinxulumene nokuhlambela jonga eyethu Uyilo lokuhlamba ngaphakathi igalari apha.
Ixabiso eliphakathi lekhekhe lomtshato
Zonke iiholide zekrisimesi ezibandakanya wonke umntu emexico
izimvo ezincinane ezivaliweyo zevaranda
iilokhwe zokunxiba emitshatweni